टिपरको ठक्करबाट ड्युटीमा खटिएका २ प्रहरीको दुःखद निधन! – PathivaraOnline
Home > समाचार > टिपरको ठक्करबाट ड्युटीमा खटिएका २ प्रहरीको दुःखद निधन!
admin May 26, 2020 समाचार 0
उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल इलाम पुर्याउँदा उनलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका सूचना अधिकारी रोमनराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो । प्रहरी हवल्दार बस्नेत चिलिङ्दिन प्रहरी चौकी राँकेमा कार्यरत थिए । दुर्घटनामा ठक्कर दिने ट्रकका चालक कमल सुवेदीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।